सर्वप्रथम महाभारतलाई चिनाउन चाह्यौं : पालिका अध्यक्ष जिम्बा – NamoBuddha Khabar
सर्वप्रथम महाभारतलाई चिनाउन चाह्यौं : पालिका अध्यक्ष जिम्बा
बिहिबार, आश्विन ३०, २०७६ | १७:२६:३८ |
शसक्त र जुझारु नेतृत्व
कान्छा लाल जिम्बालाई ५ प्रश्न !
कर्णालीको जुम्ला हुम्लामा मोटर नपुगेको विषय राष्ट्रिय मुद्धा बन्छ,सुदुरपश्चिमको छाउपडी प्रथाको चर्चा गाउँको रेडियोदेखी सिंहदरबार अनि ठूला–ठूला अन्तराष्ट्रिय दातृ मुलुकसम्म फिजिन्छ तर बत्तिमुनि अंध्यारो भनेझैं भइरहेको ठाउँ हो काभ्रेको डाँडापारी क्षेत्र । काठमाण्डौं उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्लाको दक्षिण भेगमा अवस्थित महाभारत गाउँपालिका भौगोलिक दृष्टिले निकै विकट मानिन्छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सन्दर्भमा १८६ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिका तथा यहाँका करिब १८,२८३ जनता विकासका आधारभूत पूर्वाधार र जीवनका सामान्य आवश्यकतामाथिनै संघर्ष गरिरहेका छन् । तिनका लागि हजारौं युवाले आफ्ना रगतपसिनाद्धारा विदेशी माटो रंगाउनुपरेको छ ।
डाँडापारी विकासको मेरुदण्ड मानिएको सडक सञ्जाललाई स्थायी रुप दिनमै सबैको ध्यान गएको देखिन्छ । साविकको गोकुले, फोक्सिङटार, बुढाखानी, बनखुचौर र घर्तिछाप गा.वि.स. मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाका जनताको त्यसपछिको बाटो भनेको परम्परागत कृषि पेशा र पशुपालनलाई व्यसायीकरण गर्नु रहेको देखिन्छ ।
झण्डै दुई दशकपश्चात सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधि पाएपछि महाभारतबासीमा आशााको किरण छाउन थाल्यो । तिनै आशालाई विश्वास,भरोशा हुदै निर्माणमा बदल्न यहाँका जनप्रतिनिधिले निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
भलै गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित उर्जाशील युवा कान्छा लाल जिम्बामा यसखाले साहस,अठोट र दृढ संकल्पलाई रुपान्तरण गर्ने तागत देखिन्छ,तिनैले मुर्त रुप लिन थालेका छन् त्यसैमा जनताको सपना जोडिएका छन् ।
जिम्बाले दुई दिनको पैदलमार्फत नागरिकता बनाउन सदरमुकाम धुलिखेल झर्नुपर्ने स्थानियको बाध्यताको अन्त्य गराउनुभएको छ बनखुचौरमा ईलाका प्रशासन कार्यालयसञ्चालन गरेर । संघियताको अभ्यासमा प्रवेश गरेको नेपालमा यस्ता विकट गाउँमा यो सुविधा पाउनु जनताका लागि सामान्य विषय रहेन ।
स्थानियदेखी प्रदेश र संघसम्म समन्वयकारी भुमिकामार्फत थप विकास बजेट ल्याउन माहिर जिम्बा जनतालाई सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको महसुस यसरीनै गराउन प्रतिवद्ध हुनुहन्छ । यिनै सिलसिलामा सदियौंदेखी टुकी दियालोमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मोचन गर्न गाउँपालिकामै पहिलो पटक विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ ।
भौगोलिक विकटताकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकासलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा दिदै आएको छ । यसका अलवा खानेपानी,सिञ्चाईका विविध कार्यक्रमहरु पनि अघि बढैकै छ ।
भौगोलिक बनावट,वनजंगल,जडिबुटि तथा प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण महाभारतमा पर्यटनको विकासको सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ अध्यक्ष जिम्बा । यिनै विविध पाटोबाट गाउँपालिकाको मुहार फेर्न तिनका पुर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविकनै हो ।
पालिका अध्यक्ष भएको दुई वर्षपछि जनतामा के सन्देश गएको छ त ? तिनै महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बालाई पत्रकार रोजन तामाङले लिनुभएको संवादको सम्पादित अंश (खास–खास ५ प्रश्नको उत्तर) यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.दुई वर्षको तपाईको केहि अनुभव बताउनुहुन्छकी ?
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार कल्पना गरेको छ,संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकार नितान्त नयाँ अभ्यास भएकाले सुरुमा हामीलाई केही समस्या थिए ।
हामीले पहिलो पटक, व्यवस्थापकीय अधिकार, न्यायिक अधिकार र कार्यपालिकाको अधिकार पाएका हौं । यो अधिकार पाएसँगै जनतालाई हामी गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूती गराउने प्रयासमा छौं ।
२.त्यसो भए डाँडापारीमा निर्माणको अभियान थालनी भएकै हो त ?
अवस्यपनि हो,डाँडापारीमा निर्माणको अभियान सुरु छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा महाभारतका यस्ता थप्रै विषय छन् जुन राष्ट्रिय मुद्धा बन्न सकेको छैन,यस्तो अवस्थामा महाभारतलाई चिनाउन आवश्यक ठान्यौं, यसका लागि यहाँको विशेषता,यहाँको सम्भावना र यहाँको समस्या उजार गर्नु थियो र छपनि । हो त्यसैले हामीले यहाँको मुख्य मुख्य समस्या बाहिर ल्याउने प्रयास थाल्यौं अनि त्यपछि राज्यको आँखा पर्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यहाँको कुनै पनि योजना परेको थिएन,यो समस्या समाधान गर्न नितीगत व्यवस्थाको सुरुवात गरेका छौं । राजनीतिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रसम्मका ख्यातीप्राप्त राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई महाभारत ल्याएका छौं, यसले गर्दा पनि विस्तारै त्यहाँका योजना राष्ट्रिय योजनासँग जोडिन केहि न केहि बल पुगेको छ ।
यिनै सन्दर्भमा विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तारका लागि १ अर्ब ५४ करोडको काम भइरहेको छ, यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट ४ करोड विनियोजन भएको छ ।
अहिले हामीले जुन व्यवस्थाको प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौं यो भनेको संघियता,हिजो हामीले जुन परिकल्पना र उद्धेश्यका साथ यो व्यवस्था ल्यायौं यसमा हामी कटिबद्ध भएर लाग्नैपर्छ, त्यसैले संघियतापछि महाभारत गाउँपालिकाले पनि विकासमा फड्को मारेको छ ।
नागरिकता बनाउनेलगायत अन्य प्रसासनिक कामका लागि दुई दिनको पैदल यात्रामार्फत जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल झर्नुपर्ने अवस्थाको त अन्त्यनै भईसकेको छ । अहिले डाँडापारीमै नागरिकता बनाउने काम हुन थालेको छ । यसबाट जनतामा गाउँमै सिंहदरबार आएको सन्देश गएको छ भन्ने लाग्छ ।
मैलो यसो भनिरहदा धेरैलाई थाहा छकि काभ्रेको महाभारत जिल्लाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो । सिधा र सहज सडक सम्पर्क जिल्लाभित्रैबाट छैन,त्यसैले अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न सिन्धुली फन्को मारेर जानु पर्छ । बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । एक किलोमिटर सडक बनाउन करोडौ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिच बिचमा खोलिएका ट्य«कबाट पनि सबै वडालाई जोड्न सकेका छैनौं । यसबाहेक यहाँका आवश्यकताहरु थुप्रै छन् । सरकारले भने जस्तै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ डाँडापारीका जनताले महसुस गर्ने काम हामीले पनि गर्ने पर्छ ।
यसका लागि यहाँका आर्थिक स्रोत विकासका योजनाहरु अघि सारेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,सिञ्चाई,सञ्चार जस्ता पाटोलाई संगसंगै लैजादैछौं । त्यसकारण हामी संवेदनशील छौं,प्रतिवद्ध छौं,कटिबद्ध छौं ।
३.गाउँपालिकामा विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्न कसरी सम्भव भयो ?
मैले अघि भनें,पहिला हामीले महाभारतलाई चिनाउन लाग्यौं, काठमाडौंबाट नजिक भए पनि विकासमा कर्णालीभन्दा दयनीय अवस्थामा रहेको कुरा पार्टीका नेतादेखि मन्त्रीसम्मलाई अवगत गरायौं । हाम्रो गाउँपालिकामा विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइनले कतै छोएको थिएन ।
हाम्रो अनुरोधमा मन्त्रीदेखी सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन गर्नुभयो,त्यसैले यहाँको समस्याको सम्बोधनमा ध्यान जान थाल्यो,एक वर्ष अघि विद्युत सेवा विस्तारमा हाम्रो गाउँपालिका पनि प्राथमिकतामा पर्यो,अब हामी डाँडापारि भरिनै केन्द्रीय प्रशारणबाट विद्युत आपुर्ती गराउने अन्तिम तयारीमा छौं ।
४.स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा थुप्रैले ज्यान गुमाउनुपरेको घटना यसअघि थुप्रै हुन्थेनी ?
हो थिए,तर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामी उत्तिकै संवेदनशील ढंगले लागेका छौं । मानव स्वास्थ्यको सवाल रहेकोले यसलाई विशेष महत्व दिएर कामअघि बढाएका छौं ।
निर्वाचनपूर्व गाउँपालिकामा ५ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेकामा अहिले प्रत्येक वडामा बर्थिक सेन्टर सेवासहित स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएको छ । अहिले नौ वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीयलाई सेवा प्रदान गरीरहेका छन् । पहिला पहिलाझैं उपचार नपाएर धेरै आमा र नवजात शिशुले मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन ।
हामीले अध्यक्ष स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य चौकीसम्म ल्याउन स्वास्थ्य स्वयमसेविका परिचालन गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं । परिणमस्वरुप मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमा झरेको छ । एक जना गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेका छौं ।
नेपाल सरकारले ३५ थरीका औषधी निःशुल्क प्रदान गरे पनि हामीले ६८ थरीका औषधी निःशुल्क प्रदान गर्दै आएका छौं । सामान्य रोगको उपचार गर्न शहर धाउनु पर्ने अवस्था छैन ।
स्वास्थ्य संस्थामा ११ जना कर्मचारी रहेकामा दरबन्दीअनुसार सेवा प्रदान गरेका छौं । पहिला धेरे कर्मचारी सदरमुकाममुखी हुदा पनि समस्या थिए,अहिले हामीले त्यसो हुन दिएका छैनौं ।
५.महाभारत गाउँपालिकामा पर्यटनको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सरकारले यसअघि थुप्ै कार्यक्रम ल्याए पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि । यो पटक पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुदैछ । नेपालमा प्राकृतिक र सांसकृतिक पर्यटनको सम्भावना राम्रो छ,पर्यटकहरु यिनै चिजहरुको अनुभव लिने,अवलोकन गर्ने सयर गर्ने गर्छन् ।
यसमा हाम्रो पालिकाभित्र भर्जिन डेस्टिनेसन धेरै छ,गाउँपालिकाको नामबाटै धेरैले पर्यटकिय दृष्टिले हेर्नेमा पर्छ महाभारत ।
अग्लो सामुन्द्रिक सतहबाट अन्दाजी ५००० हजार मि. उचाइमा रहेको ताराखासे लेक यसै गाउँपालिकामा पर्दछ । दक्षिण सिमानामा कञ्चन रुपमा बगिरहने कोखाजोर नदी,पश्चिम सिमानामा चौखोला नदीले यस गाउँपालिकालाई घेरिएको छ ।
यहाँ पदयात्राका लागि सम्भावना धेरै छ । पर्यटक या जोकोहीलाई आकर्षित गर्न सक्ने अग्र्यानिक उत्पादनहरु छन् । हामीसँग रैथाने बाली र बिउको भण्डार छ ।
त्यस्तै यहाँ धेरै हिम श्रृंखला,पर्वत,वन जंगल,झरना,फूल जस्ता प्राकृतिक छटाका साथै रोचक साँस्कृतिक मिथकिय आस्थाले भरिएका क्षेत्र त्यतिकै छन्,तामाङ,मगर जस्ता समुदायको टिपिकल जीवनशैली भेटिन्छ, त्यसका लागि होमस्टे, होटल स्थापना जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान गएको छ । यिनै मुताविकका एजेण्डा तय गर्दै अघि बढेका छौं ।